Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra mikasika ny Maldiva
Firenena ao Azia Atsimo BangladeshBhutanIndiaMaldivaNepalPakistanaSri Lanka
Tahiry isam-bolana Aogositra 2015 1 Lahatsoratra Janoary 2014 1 Lahatsoratra Novambra 2013 1 Lahatsoratra Febroary 2012 1 Lahatsoratra Janoary 2011 1 Lahatsoratra Marsa 2009 1 Lahatsoratra Janoary 2008 1 Lahatsoratra Tantara mikasika ny Maldiva 09 Aogositra 2015
SARIPIKA: Olon'i Azia Atsimo Mpanoratra Rezwan · Bangladesh "Mampatsiahy ahy ny hitia sy hanaja ny rehetra izany - zavatra izay zary adinon'ny olona maro aty Pakistana"
09 Novambra 2013
SARIPIKA: ‘Hetsika Mangina’ Mitaky Fifidianana Ao Maldives Mpanoratra Saffah Faroog · Fanoherana tsy tankina noho ny fanemorana hatrany ny fanirian'ny vahoaka hanatontosa fifidianana malalaka sy marina araka ny tahirin-tsary iray nalaina nandritra ny 'hetsi-panoherana mangina'.
10 Febroary 2012
Maldives: Voamariky ny Herisetra Mpanoratra Saffah Faroog · Fanoherana Nandray kihon-dalana mahatsiravina ny olana politika ao Maldives tamin'ny Alarobia teo rehefa nodarohan'ny polisy an-kerisetra sy noratrainy ireo mpanohana ny filoha teo aloha, Mohamed Nasheed, teo ampanaovana hetsi-panoherana manohitra ny lazain-dry zareo ho fanonganam-panjakana nahatonga ny fanesorana teo amin'ny fitondrana ny filoha voalohan'ity nosy ity voafidy tamin'ny fomba demaokratika.
31 Janoary 2011
Maldiva: Ho Firaisankina amin'i Ejipta Mpanoratra Saffah Faroog · Fanoherana Ny hetsi-panoherana mitranga any Ejipta dia toy ny ‘herinaratra’ namely ny mponin'ny aterineto tao Maldiva. Ireny fitroarana ireny dia nanana ny dikany manokana mihitsy satria namelona indray ny fahatsiarovana ny hetsi-panoheran'ireo mpandàla ny demaokrasia vao taona vitsy lasa monja izay mba hamerenana ny demaokrasia ao amin'ity tangoro-nosy mitambatra ho firenena... 25 Marsa 2009
Maldives : Tandindonin-doza ny fahafahana maneho hevitra Mpanoratra Saffah Faroog · Fahalalahàna miteny Male, the capital of Maldives. Image by Flickr user mode (http://www.flickr.com/photos/mashafeeg/397839215/) Ny fiandohan'ny volana marsta dia nifankahita tamin'i Frank La Rue mpitondra teny manokan'ny Firenena Mikambana momba ny fahafahana maneho hevitra sy miteny ny filoha vaovaon'i Maldives, Mohammed Nasheed. Nandritra ny fihaonana dia nilaza i Nasheed fa manaiky tsara ny...
Tselatra mikasika ny Maldiva
12 Janoary 2008PolitikaNosy Maldiva : Avotra ny filoham-pirenena
Asehoy daholo Tselatra mikasika ny Maldiva »Araho Twitter